Intellectueel အိမ်ခြံမြေဥပဒေ | Eindhoven & အမ်စတာဒမ်
သင်၏အလုပ်ကိုအခြားလူများအားတားဆီးရန်အတွက်သင်၏တီထွင်ထားသောအတွေးအခေါ်များနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအယူအဆများကိုအသိဥာဏ်ပညာဆိုင်ရာဥပဒေကကာကွယ်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ဖန်တီးမှုကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောဆန်းသစ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အထူးအရေးကြီးသည်။ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါသလား။
သင်၏အလုပ်ကိုအခြားလူများအားတားဆီးရန်သင့်တီထွင်ထားသောအတွေးအခေါ်များနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအယူအဆများကိုအသိဥာဏ်ပညာဆိုင်ရာဥပဒေကကာကွယ်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ဖန်တီးမှုကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေပြီးဆန်းသစ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အထူးအရေးကြီးသည်။
ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါသလား။ မှာအထူးကု Law & More သင်၏အတွေးအမြင်များသို့မဟုတ်ဖန်တီးမှုများကိုကာကွယ်လိုပါကသင့်အားတရားဝင်အကူအညီများပေးနိုင်သည်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါကမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိမ့်မည်။ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုမှာ -
client ရဲ့ပြproblemsနာတွေ။ ”
အကယ်၍ သင်သည်တီထွင်သူ၊ ဒီဇိုင်နာ၊ တီထွင်သူ၊ ရေးသားသူဖြစ်လျှင်သင်၏အလုပ်ကိုဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်။ အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကခွင့်ပြုချက်မပေးပဲအခြားသူများကသင်၏ဖန်တီးမှုကိုအသုံးမပြုရန်သေချာစေသည်။ ဤသည်ကသင့်အားကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်ရရှိရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ကာကွယ်မှုရရှိရန်သင့်တွင်အသေးစိတ်အကြံဥာဏ်ရှိရန်အရေးကြီးသည်။ အကြံဥာဏ်တစ်ခုတည်းနှင့်မလုံလောက်ပါ၊ ၎င်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ သင့်တွင်တီထွင်ကြံစည်မှုတစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်သင်၏ဉာဏပစ္စည်းများကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများရှိသည်။ သီးခြားဖြစ်စေ၊
သင်သည်စာအုပ်၊ ရုပ်ရှင်၊ တေးဂီတ၊ ပန်းချီ၊ ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ပန်းပုလက်ရာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမှတ်ပုံတင်လိုပါသလား။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်သည်
ကွဲပြားခြားနားသောဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများရှိသည်။ သဘောသဘာဝ၊ အကျယ်အဝန်းနှင့်ကြာချိန်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အတော်များများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ Law & Moreမူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေ၊ မူပိုင်ခွင့်များနှင့်မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များပါ ၀ င်သည်။ ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့် Law & More ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုသင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မူပိုင်ခွင့်သည်ဖန်တီးသူ၏လက်ရာများကိုကာကွယ်ပေးပြီးဖန်တီးသူအားသူ၏လုပ်ငန်းကိုတတိယပါတီများမှအလွဲသုံးစားမှုများမှထုတ်ဝြေပီးထုတ်ဝေခွင့်နှင့်ကာကွယ်ခွင့်ကိုပေးသည်။ 'အလုပ်' ဟူသောဝေါဟာရသည်စာအုပ်များ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ တေးဂီတ၊ ပန်းချီကားများ၊ ဓာတ်ပုံနှင့်ပန်းပုများဖြစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလျှောက်ထားရန်မလိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်တစ်ခုကိုဖန်တီးသောအခါအလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်သောကြောင့်မူပိုင်ခွင့်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ မှန်ကန်မှုကိုရရှိရန်အတွက်သင်သည်အလုပ်သည်သတ်မှတ်ထားသောရက်တစ်ခုအတွင်းတည်ရှိကြောင်းအမြဲသက်သေပြနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်သင်၏မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်သူတွေကိုဆန့်ကျင်သင်၏အလုပ်ကာကွယ်ချင်ပါသလား? ကျေးဇူးပြုပြီးရှေ့နေများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ Law & More.
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေကသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သို့မှသာသင်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲသင်၏အမည်ကိုမည်သူမျှအသုံးမပြုနိုင်ပေ။ သင်ကကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်တွင်မှတ်ပုံတင်လျှင်မှသာကုန်အမှတ်တံဆိပ်ညာဘက်အတည်ပြုသည်။ Law & Moreရှေ့နေတွေကဒီကိစ္စအတွက်သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲမှတ်ပုံတင်ပြီးအသုံးပြုပါက၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ Law & More ထို့နောက်ရှေ့နေသည်သင့်အားချိုးဖောက်သူများကိုအရေးယူရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်။
သင်တီထွင်မှုတစ်ခု၊ နည်းပညာထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုတီထွင်ပြီးသည်နှင့်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သင်၏မူပိုင်ခွင့်သည်သင်၏တီထွင်မှု၊ ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သီးသန့်အခွင့်အရေးရှိသည်။ မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ချက်လေးခုကိုသင်ဖြည့်ဆည်းရမည် -
•တီထွင်မှုအဆင့်ရှိရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏တီထွင်မှုသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်ရမည်၊ ရှိပြီးသားထုတ်ကုန်အပေါ်အနည်းငယ်မျှသာတိုးတက်မှုမဟုတ်ပါ။
Law & More သင်လိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်ကိုက်ညီပြီးမူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်သင်ကူညီပေးသည်ကိုစစ်ဆေးသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုသည်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်ပတ်ရန်အမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်တူညီနိုင်သော်လည်းအမြဲတမ်းတော့ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များကိုကုန်သည်ကြီးများအသင်းတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ပြိုင်ဘက်များသင်၏ကုန်သွယ်ရေးအမည်အားအသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုပါ။ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအမည်နှင့်ရှုပ်ထွေးစွာဆင်တူသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုလည်းခွင့်မပြုပါ။ သို့သျောလညျး, ဒီကာကွယ်မှုဒေသဆိုင်ရာခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဒေသများရှိကုမ္ပဏီများသည်အလားတူသို့မဟုတ်တူညီသောအမည်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအပိုအကာအကွယ်ပေးထားနိုင်သည်။ ရှေ့နေများ Law & More ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးသည့်အနေဖြင့်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
သင်တစ် ဦး ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရှေ့နေရှာဖွေနေပါသလား ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပါ Law & More။ သင်၏အခွင့်အရေးများကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်သင်၏အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရပါကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။